Miteraka ady hevitra ara-pitsarana ny fanentanana ara-politika ataon’ireo minisitra Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Ankoatra ny adihevitra araka ny lalàna, mitondra vesatra ara-moraly ihany koa ireo minisitra
Voadika ny 20 Mey 2022 5:22 GMT
Ny Filohan'i Nizeria Muhammadu Buhari sy ny filoha lefitra Yemi Osinbajo, nandritra ny fampielezan-kevitry ny antoko eo amin'ny fitondrana tamin'ny 16 Janoary 2015. Sary avy amin'i Heinrich-Böll-Stiftung tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).
Nanambara ampahibemaso ny minisitra lefitry ny fampianarana any Nizeria, Emeka Nwajiuba tamin'ny 27 Aprily fa mikasa ny hametraka ny firotsahany hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Nizeria izy. Efatra andro talohan'izay, ny 18 aprily, nanatevin-daharana ny hazakazaka ho filoham-pirenena ihany koa i Chris Ngige, minisitry ny asa sy ny mpiasa.
Nividy ny taratasy firotsahana 100.000.000 NGN (eo amin'ny 2.400 dolara eo ho eo) tamin'ny antokon'ny fitondrana, ny All Progressive Congress (APC) i Nwajiuba sy Ngige. Aloan'ireo kandidà mirotsaka hofidiana ny vola hahazoana taratasy firotsahan-kofidiana amidin’ny antoko politika. Na dia amin'ny taona 2023 aza i Nizeria no handrotsa-bato, dia efa nanomboka nifidy ny kandidàny ireo antoko politika.
Afaka milatsaka hofidiana ve ny minisitra am-perinasa?
Tsy i Nwajiuba sy Ngige irery ihany no minisitra ao amin'ny kabinetra izay nanambara ny fanirian'izy ireo hilatsaka hofidiana. Nanambara ny fikasany hirotsaka hofidiana governora ao amin'ny fanjakana niaviany ao Kogi, any avaratra-atsinanan'i Nizeria ihany koa ny lehiben'ny Fampanoavana ao Nizeria sady Minisitry ny Fitsarana Abubakar Malami. Torak'izany koa ny minisitry ny fitaterana Rotimi Amaechi, izay nanatevin-daharana hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena.
Iray amin'ireo ‘fandrosoana’ mahaliana indrindra amin'ny politika Nizeriana ho ahy ity zavatra izay handàvan'ireo olom-boatendry ara-politika mirotsaka hofidiana ao Nizeria hiala 30 andro mialoha ny fifidianana savaranonando, araka ny voalazan'ny lalàm-pifidianana.
Ny fizarana faha-84(12) ao amin'ny Lalàna mifehy ny fifidianana ao Nizeria 2022 dia manaisotra an-kitsirano ireo Nizeriana “voatendry ara-politika amin'ny ambaratonga rehetra” — eo an-toerana, fanjakana, na federaly — tsy ho “solontena mifidy na hofidiana amin'ny fivoriambe na kongresin'ny antoko politika rehetra hikendrena hanendrena ireo kandidà amin’ny fifidianana rehetra”. Vokatr'izany, midika izany fa tsy maintsy miala amin'ny toerany ny tompon’andraiki-panjakana rehetra ao amin’ny andrim-panjakana mpanatanteraka alohan’ny hirotsahana hofidiana eto amin’ny firenena. Ny tsy fanaovana izany dia “fanitsakitsahana ny lalàm-pifidianana ary vao mainka mahatonga ny fifidianana savaranonando ho foana sy tsy ara-dalàna”, hoy ny fanamarihan’ny Nigerian Cable, gazety an-jotra iray.
Nametra-pialàna ireo olom-boatendry ara-politika maro manao fanentanam-pifidianana eny anivon’ny fanjakana. Natao izany mba hamenoana ny fe-potoana farany 3 Jona, napetraky ny tompon’andraikitra misahana ny fifidianana eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (INEC).
Tamin'ny 27 Aprily, nanome baiko ireo minisitry ny governemanta mifandraika amin'izany — Amaechi, Malami, Nwajiuba, ary Ngige ny antokon'ny fitondrana APC— mba hiala amin'ny toerany ao anatin'ny 72 ora mba hanarahana ny lalàna mifehy ny fifidianana. Tsy nisy niala tamin’ny toerany ao amin'ny kabinetra anefa ireo kandidà ireo. Nilaza manokana i Nwajiuba fa “30 andro mialoha ny fifidianana filoham-pirenena araka ny voalazan’ny Lalàm-panorenan’ny Repoblika Federalin’i Nizeria izy vao hametra-pialàna”, hoy ny tatitry ny gazety Vanguard.
Niantehitra tamin'ny didim-pitsarana tamin'ny martsa 2022 navoakan'ny Mpitsara (Justice) Evelyn Anyadike ao amin'ny (Fitsarana) Avo Federaly Umuahia, Fanjakan'i Abia, any atsimo atsinanan'i Nizeria ilay minisitra. Nofoanan'ny didim-pitsarana navoakan'i Anyadike ny fizarana faha-84 (12) amin'ny Lalàna momba ny Fifidianana 2022 nasiam-panitsiana ary nanome baiko fa tokony hofafana tsy ho ao anatin'ny lalàm-pifidianana izany.
Nohamafisin’ny fitsarana fa ny Fizarana faha-66(1)(f); 107(1)(f); 137(1)(g); ary ny 182(1)(g) amin’ny Lalàmpanorenan’ny taona 1999 dia efa milaza fa ireo tompon’andraiki-panjakana mifaninana amin’ny toerana hofidiana dia afaka “mametra-pialana 30 andro fara fahakeliny mandra-pahatongan’ny datin’ny fifidianana ary ny lalàna hafa izay manery ireo voatendry ireo hametra-pialana na hiala amin’ny toerany amin’ny fotoana rehetra alohan'izany, dia tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana, tsy manan-kery, tsy ara-dalàna, foana ary tsy misy dikany raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fepetra mazava ao amin'ny Lalàm-panorenana,” araka ny tatitra nataon'ny Dataphyte.
Nanamafy ny didim-pitsarana ny Lehiben'ny Fampanoavana sady minisitry ny Fitsarana ao Nizeria, Abubakar Malami, fa: “Tsy ao anatin'ny lalànantsika ny fepetra voalazan'ny Fizarana faha-84(12) amin'ny Lalàna momba ny Fifidianana 2022 ary horaisina araka izany.”
Vaovao farany: nanapa-kevitra ny hampakatra ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Avo Federaly Umuahia ny @HouseNGR izay mangataka amin'ny Lehiben'ny Fampanoavana mba hamafa ny fizarana 84(12) amin'ny Lalàna momba ny Fifidianana 2022 lany vao haingana.
Na dia izany aza, samy nampanantena hampakatra ny didim-pitsarana any amin'ny Fitsarana Avo mba hanafoana ny Fizarana faha-84 (12) amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana na ny antenimieram-pirenena na ny antenimieran-doholona ao Nizeriana.
Ny mety ho fanitsakitsahana ny etika
Raha mbola miady hevitra momba ny maha ara-dalàna ny fampielezan-kevitry ny minisitra ny maro, miteraka fanontaniana ara-etika lehibe ihany koa izany.
Ohatra, mety ho ara-dalàna ho an'i Malami amin'ny maha Lehiben'ny Fampanoavana azy ao Nizeria ny miasa ho manampahefana ara-dalàna ao amin'ny firenena sady mpanao politika miandany. Na izany aza, “mety hisalasalana ara-pitondrantena ny fandraisany anjara amin’ny politika miandany”, hoy ny fanamafisan’ny gazety Ripples Nigeria. Fanampin'izay, manitrikitrika i Ikechukwu Amaechi, mpanoratra matoandahatsoratra ao amin'ny gazety Vanguard fa: “Amin'ny maha Tompon'andraikitra Lehiben'ny Lalàna azy, ny fihetsika sy ny fitenenan'izay mitàna ny toerana dia tsy maintsy mahahoatra ny fiandaniana. Ny tombotsoan’ny fahamarinana no vao maika tsy maintsy hisandratan'izay ao amin'io birao io ambonin’ny fifandrotehana manadala ho amin’ny soa iombonana”.
Nitokona nandritra ny 72 andro ny ASUU ary vao avy nizara N100m ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena hividianana ny taratasy fangatahana filatsahana ho filoham-pirenena ao amin'ny APC.
30 andro izay no nisian'ny daroka baomba tao amin'ny fiarandalamby Kaduna – Abuja & fakana an-keriny olona maherin'ny 100 sy ny firotsahan'ny minisitry ny Fitaterana ho Filoha.
Mandritra izany, rehefa miady amin'ny krizy ara-politika maromaro i Nizeria, anisan'izany ny fitokonana naharitra roa volana ataon'ny Sendika Mpandraharahan'ny Oniversiten'i Nizeria (ASUU) izay nampiato ny fotodrafitrasa fanabeazana ao amin'ny distrika, misy fiantraikany ara-etika maharitra ho an’ny firenena ny fidiran'i Nwajiuba sy Ngige eo amin'ny sehatra politika.